Sida looga fogaado qayaamada internetka | Somaliska
Internetku waa goob baaxad weyn oo qof fiican iyo mid xunba ay ka qaraabtaan. Waa meel aad wax ka iibsan karto, lacag qof u diro karto, waa meel warbixintaada lagu xadi karo oo lagugu qayaani karo. Hadaba sideed uga fogaan kartaa in aan lagugu qayaamin intenetka? Qodobadaan ayaa ku caawin kara. 1. Waayo cida aad la xiriireyso: Haddii aad website aad wax ka iibsaneyso ama aad lacag sadaqo ah bixineyso ama laguu balan qaaday in aad lacag ku guuleysanayo iska fiiri cida websiteka iska leh, raadi telfoonokooda iyo cinwaankooda. Sidoo kale raadi warbixin ku saabsan websiteka, waxaa macquul ah in aad hesho dadkale oo horey loo qayaamey ama si wanaagsan loola dhaqmay. 2. Ha dhageysan lacag dhib yar: Mararka qaar waxaa macquul ah in aad aragto xayeysiimo ama emailo kuu balan qaadayo lacag dhib yar, sida shaqo dhibyar, in aad lacag badan ku guuleysan karto iwm. Hadaba ogoow waxkasta oo la xiriira arintaas waa qayaamo lagu doonayo in ama lacag lagaaga helo ama warbixintaada lagu xado. 3. Maxaa lagaa gadayaa: Haddii aad shey internetka ka iibsaneyso, horta fahan waxa aad iibsaneysid, dadka qayaamada sameeya waxay isku dayayaan in ay kuu faaniyaan wax aan cadeyn waxa ay yihiin. Haddii cida aad wax ka iibsaneysid ay yihiin kuwo sax ah waxay kuu sheegayaan sheyga, qiimaha, xiliga laguu keenayo, soo celinta lacagta iyo gaarantiiga sheyga. 4. Iska ilaali degdega: Haddii cidaad wax ka iibsaneysid ay isku dayayaan in ay deg deg wax kaaga iibiyaan oo aysan ku siin waqti aad ku soo fikirto, ogow waa qayaamo. 5. Foomkasta ha iska buuxin: Mararka qaar waxaa dhacda in aad aragto xayeysiin xiiso leh oo ku dhaheysa ka qeyb qaado tartan ama ku guuleyso lacag ka dibna waxay ku waydiinayaan warbixintaada. Ha iska buuxin foomkasta. Qaasatan kaarkaaga bankinga, nambarkaaga aqoonsiga cidna ha siin. Haddii website uu ku weydiinayo warbixin aad hore u siisay waxay u badantahay in ay qayaano tahay. 6. Ha u jawaabin emailkasta: Dadka qayaanoolayaasha way iska qayaasaan emailada, haddii aad u jawaabto fariintooda waxay ogaanayaan in emailaaga shaqeynayo oo waligood way kula soo xiriirayaan. Email aadan aqoon cida uu ka yimid ha u jawaabin. Junk Mail u dir. 7. Iska ilaali iska-dhigayaasha: Waxaa jiro dad sameeya emailo ama website u eg kuwa shirkadaha waaweyn ee la yaqaan ka dibna kula soo xiriirayo. Waxaa macquul ah in aad istiraahdo wuxuu ka yimid Facebook ee basweerkaaga sii balse waxaa macquul ah in websitekaas loo ekeysiiyay Facebook balse uusan ahayn. Si fiican isaga fiiri cinwaanka websitekaad aad booqanayso iyo emailka uu ka yimid. 8. Ha soo dejin waxkasta: Ha iska soo dejin barnaamijka kasta oo aad internetka ku aragto, qaar badan ayaa wata virus qatar galin kara kombutarkaaga . Iska fiiri website aad wax ka soo dejineyso, ha soo degsan wax aadan u baahneyn. 9. Wax ku iibso qaab nabad ah: Haddii sheyga aad iibsaneyso laga heli karo suuqa oo aad lacag ku soo iibsan karto, ka fogoow in aad internetka isticmaasho waayo qatarta waa ay wayntahay. Mowduucyo la xiriira teknolojiyada oo kan la mid ah waxaad kala socon kartaa bogeena kale ee http://www.casriga.com
Internetku waa goob baaxad weyn oo qof fiican iyo mid xunba ay ka qaraabtaan. Waa meel aad wax ka iibsan karto, lacag qof u diro karto, waa meel warbixintaada lagu xadi karo oo lagugu qayaani karo. Hadaba sideed uga fogaan kartaa in aan lagugu qayaamin intenetka? Qodobadaan ayaa ku caawin kara.
1. Waayo cida aad la xiriireyso: Haddii aad website aad wax ka iibsaneyso ama aad lacag sadaqo ah bixineyso ama laguu balan qaaday in aad lacag ku guuleysanayo iska fiiri cida websiteka iska leh, raadi telfoonokooda iyo cinwaankooda. Sidoo kale raadi warbixin ku saabsan websiteka, waxaa macquul ah in aad hesho dadkale oo horey loo qayaamey ama si wanaagsan loola dhaqmay.
2. Ha dhageysan lacag dhib yar: Mararka qaar waxaa macquul ah in aad aragto xayeysiimo ama emailo kuu balan qaadayo lacag dhib yar, sida shaqo dhibyar, in aad lacag badan ku guuleysan karto iwm. Hadaba ogoow waxkasta oo la xiriira arintaas waa qayaamo lagu doonayo in ama lacag lagaaga helo ama warbixintaada lagu xado.
3. Maxaa lagaa gadayaa: Haddii aad shey internetka ka iibsaneyso, horta fahan waxa aad iibsaneysid, dadka qayaamada sameeya waxay isku dayayaan in ay kuu faaniyaan wax aan cadeyn waxa ay yihiin. Haddii cida aad wax ka iibsaneysid ay yihiin kuwo sax ah waxay kuu sheegayaan sheyga, qiimaha, xiliga laguu keenayo, soo celinta lacagta iyo gaarantiiga sheyga.
4. Iska ilaali degdega: Haddii cidaad wax ka iibsaneysid ay isku dayayaan in ay deg deg wax kaaga iibiyaan oo aysan ku siin waqti aad ku soo fikirto, ogow waa qayaamo.
5. Foomkasta ha iska buuxin: Mararka qaar waxaa dhacda in aad aragto xayeysiin xiiso leh oo ku dhaheysa ka qeyb qaado tartan ama ku guuleyso lacag ka dibna waxay ku waydiinayaan warbixintaada. Ha iska buuxin foomkasta. Qaasatan kaarkaaga bankinga, nambarkaaga aqoonsiga cidna ha siin. Haddii website uu ku weydiinayo warbixin aad hore u siisay waxay u badantahay in ay qayaano tahay.
6. Ha u jawaabin emailkasta: Dadka qayaanoolayaasha way iska qayaasaan emailada, haddii aad u jawaabto fariintooda waxay ogaanayaan in emailaaga shaqeynayo oo waligood way kula soo xiriirayaan. Email aadan aqoon cida uu ka yimid ha u jawaabin. Junk Mail u dir.
7. Iska ilaali iska-dhigayaasha: Waxaa jiro dad sameeya emailo ama website u eg kuwa shirkadaha waaweyn ee la yaqaan ka dibna kula soo xiriirayo. Waxaa macquul ah in aad istiraahdo wuxuu ka yimid Facebook ee basweerkaaga sii balse waxaa macquul ah in websitekaas loo ekeysiiyay Facebook balse uusan ahayn. Si fiican isaga fiiri cinwaanka websitekaad aad booqanayso iyo emailka uu ka yimid.
8. Ha soo dejin waxkasta: Ha iska soo dejin barnaamijka kasta oo aad internetka ku aragto, qaar badan ayaa wata virus qatar galin kara kombutarkaaga . Iska fiiri website aad wax ka soo dejineyso, ha soo degsan wax aadan u baahneyn.
9. Wax ku iibso qaab nabad ah: Haddii sheyga aad iibsaneyso laga heli karo suuqa oo aad lacag ku soo iibsan karto, ka fogoow in aad internetka isticmaasho waayo qatarta waa ay wayntahay.